सैनिक महोत्सवमा दर्शकको उत्साहजनक सहभागिता, १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
झापा, १३ फागुन, फागुन ३ देखि १३ गतेसम्मका लागि लगाइएको सैनिक महोत्सव फागुन १६ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । दश दिनका लागि लगाइएको महोत्सवलाई दर्शकहरुले बढाउन माग गरेपछि थप तीन दिन लम्ब्याइएको महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक अर्जुन सिटौलाले बताए ।
उनले प्रत्येक दिन १५ सयको हाराहारीमा दर्शकहरुले महोत्सव अवलोकन गर्ने गरेको जनाए । मेलामा ४० वटा स्टलहरु रहेका छन् । झापाको पुरानो सैनिक बजारको इतिहास तथा वडा नं १० भित्र रहेका महाभारतकालिन पोखरी र मठमन्दिरको पहिचानलाई जोगाउन भन्दै विर्तामोड नगरपालिका १० नं. वडा कार्यालयद्वारा महोत्सव आयोजना गरिएको हो ।
महोत्सवमा धान नाच, लठ्ठा तान्ने खेलले दर्शकहरुको मन खिच्न सफल भएको विर्तामोड १० का वडाध्यक्ष दुर्योधन गुरुङले बताए । वडाभित्र रहेका ११ वटा टोल विकास समितिहरुबीच लठ्ठा तान्ने प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । त्यस्तै म्यूजिकल चियर, हाउजी जस्ता खेलले दर्शक तान्न सफल भएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । सैनिकबजार सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील रहेको भन्ने अपवाहलाई यस महोत्सवले चिर्न सकेको उनको भनाइ छ ।
महोत्सवमा दैनिक राष्ट्रिय कलाकारहरुको प्रस्तुति रहने गरेको छ । आजसम्म श्रीकृष्ण लुइटेल, तुष्णा गुरुङ, संजय तुम्रुक, डम्बर नेपाली, जुनु प्रसाई, चेतन चुडालजस्ता कलाकारहरुले आ—आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन् भने ज्योति मगर, राजेशपायल राई, नरेन्द्र लिम्बू लगायतको प्रस्तुति बाँकी रहेको महोत्सव संचालक प्रभात मुखियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सांगीतिक कार्यक्रमसँगै प्रत्येक दिन विभिन्न जनतजातिको झाँकी र नृत्य हुने गरेको छ । विर्तामोड १० मा २५ भन्दा बढी जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ ।
Tagged झापा मेला महोत्सव
मेलिना र देवेनको ‘आजको दिन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
बाघको आक्रमणबाट नौ गाई मरे
गाउँ–गाउँमा जनता कांग्रेस खोजेर बसिरहेका छन् : डा. महत
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री ओली
Tags: झापा मेला, महोत्सव